Wacyiga Todobaadka: Toosinta Salaadka « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Wacyiga Todobaadka: Toosinta Salaadka
Wacyiga Todobaadka: Toosinta Salaadka By hiildan on August 28, 2012	• ( 0 )
Qur’aanku wuxu bilawga suuradda Al-Baqara kaga sheekeeyey labo nooc oo ay dadka ka mid ah, isaga oon magacdooda innoo qeexin, balse uu inoo sheegay tilmaamaha lagu kala garto.
Nooca hore, waa kuwa “qeeybka” rumeeyey ee toosiya salaadda ee waxa Allah ku manaystay bixiya: “الدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم الله ينفقون” . Kuwa kalena, waa kuwo ka soo horjeeda, waxaanu Qu’aanku taxay tilmaamo badan oo ay leeyihiin oo aan wax ka sheegi doono.
Waxa kale oo tilmaamahooda ka mid ah, in ay “toosiyan salaadda”. Waana erayadan qodobka u baahan in an is dul taagno. Marka Qu’aanku ka hadlayo salaadda wuxu had iyo jeer uga hadlaa “toosin”. Toosin-na waxa ah marka wax la dhisayo ama la abuurayo oo ku tilmaaman joogtayn waarta oo jiritaankeedu adkaado. Meelna Qur’aanka kagama jirto in Allah uu ka dalbayo kuwa rumeeyey in ay “gutaan” ama la yimaaddaan salaadda; waxase uu mar kasta ku amraa in ay “toosiyaan” salaadda. Taasina waxay, inna tusinaysaa in salaaddu aanay ahayn kaliya xarakaat uu la yimaado qofka muslimka ahi, balse ay salaaddu salka ku hayso fahamka ah in xiriir “la dhiso”. Sidaa darteed, salaadda oo la toosiyaa waxay tahay in xiriir addoonka iyo Illaahay u dhexeeya la abuuro oo la ilaaliyo (ama la xafido). Si kale haddaan u dhigno, aayad kasta oo innaga dalbaysa in aan “toosinno” salaaddu waxay innaga dalbaysaa in aan ku tallaabsanno sidii aynnu u xaqiijin lahayn xiriir waara oo qofka muslimka ah iyo Illaahay u dhexeeya.
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Maxay Tahay Falsafadda Ka Danbeeysa In Carruurteena Lagu Baro Culuunta Galmada,Ee Iskuulada wadamada Yurub?: What Is The Philosophy Behind The Sex Education Of Our Children In Europe Schools??TACSI: Allaha U Naxariisto Marxuum Ibraahim Magan Nuur »Categories: Warka (News)	Related Articles
Blog Stats	1,210,873 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)